Ceeyrinta Tillerson : Maxaa lagu qoonsaday ? - BBC News Somali
Ceeyrinta Tillerson : Maxaa lagu qoonsaday ?
Lahaanshaha sawirka Gettycomp
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa shaqadii ka eryay xoghayihii arrimaha dibedda Rex Tillerson oo xilka hayay muddo hal sano ah. Haddaba maxay tahay sababta, maxayse isku qoonsadeen labada nin.
Markii xilka madaxtinimada loo doortay Trump ee uu goobayay dadkii uu u kala dhiibi lahaa xilalka muhiimka , waxa uu talo soo jeedin ka heley xoghayihii hore ee arrimaha dibedda Condoleezza Rice iyo agaasimihii hore ee CIA-da, ahaana xoghayihii difaaca Maraykanka Robert Gates, taladana waxa ay ahayd in uu xoghayaha arrimaha dibedda ka dhigo Rex Tillerson.
Waxa ay aaminsanaayeen in Tillerson oo meelo badan oo adduunka ka mid ah heshiisyo kasoo galay uu matali karo danaha Maraykanka.
Tillerson waxa uu markaas ka hor ahaa agaasimaha shirkadda batroolka ee Exxon, noloshana waxa uu ka joogay heer aad u sareeya, oo xitaa ka saraysa halkii uu ka joogay Trump ka hor intii uusan madaxweynaha noqonin.
Laakiin biloowgiiba labada nin si fiican maysan iskula jaanqaadin, waxayna ahaayeen rag ku kala duwan dhinac kasta, shaqsi ahaan iyo siyaasad ahaanba.
Trump oo ah nin qab leh, islamarkaasna jecel in la amaano, aanana u dulqaadan karin waxyar oo laga sheego, ayaa waxaa la sheegay in uu aad uga xanaaqay hadal laga soo xigtay Tillerson oo uu ka sheegay isaga.
Warbaahinta Maraykanka ayaa tabisay in Tillerson uu Trump ku tilmaamay 'doqon'.
Trump ayaa waxa la sheegay in uusan la dhacsanayn sida uu u fikiro Tillerson, sidaasi darteed ayuu marar badan xubnaha qoyskiisa u kala direy adduunka si ay usoo galaan wadahadalo ay ahayd in uu u matalo Tillerson.
Tillerson waxa uu u ekaaday nin xafiiska iska jooga, balse aanan lahayn awood rasmi ah iyo saamayn uu madaxweynaha kaga dhaadhiciyo fikradaha.
Image caption Tillerson ma ahayn nin faraxsan
Waxaa xitaa dhacday in Trump uu boggiisa Twitter-ka fariin ugu diro Tillerson, wuxuuna ku yiri "Waxbo ha isku daalin Kuuriyada Waqooyi, wax kasoo baxayo ma jiraan", hadalkaasna waxaa loo arkay in uu yahay mid uu ku mijo xaabinayo Tillerson.
Dhawaan markii uu booqashada ku tagay Afrika, Tillerson waxa uu dhaleeceyn u jeediyay xukuumadda Moscow, kuna eedeeyay weerarkii hubka kiimikada ee lagu qaaday nin horey uga tirsanaan jiray sirdoonka Ruushka Sergei Skripal.
Balse arrintaas ma ahayn mid farxad galiyay Aqalka Cad oo aanan doonaynin in wax laga sheego Ruushka, waxayna ahayd arrintii soo afjartay cimriga muddada xilheyntiisa. Hase yeeshee waxa ay u muuqatay in Tillerson uu ku faraxsanaa in uu xilka ka tago.
Xil ka qaadistiisa ayaa waxaa lagu shaaciyay bogga Twitterka Trump, waxayna noqotay in Tillerson uu arrinkani ku wargaliyo mid ka mid ah gacanyareyaashiisa maadaamaa uusan isaga isticmaalin Twitter.
Trump ayaa hadal uu jeediyay markii dambe ku yiri "Waxaan u maleynayaa in Tillerson uu hadda aad u farxi doono".
Hadalkaas ayaa ah run, islamarkaasna uu muujiyay Tillerson laftiisa oo aysan wax dhib ah ula muuqanin in xilka laga qaado.